कांग्रेसको भूमिकामा प्रश्नै–प्रश्न - Sankalpa Khabar
नेपाली कांग्रेस सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडक संघर्षमा होमिएको छ । देशभरका कार्यकर्तालाई स्थानीय तहदेखि संघीय राजधानीसम्म विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी परिचालन गरिएको छ । जनतालाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति भएका आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दल भएकोले पनि हुनुपर्छ, नेपाली कांग्रेसप्रति आशा पनि राखिन्छ र आक्रोस पनि पोखिन्छ । स्वभाविक रुपमा कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि पनि व्यापक छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था यसका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्न नसक्नु नेपाली कांग्रेसको ठूलो कमजोरी हो । त्यसैकारणले गर्दा देशको अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको हो भन्ने जनगुनासो अस्वभाविक र अनुचित होइन । तर पछिल्लो पटक भएको संसद विघटनमा नेपाली कांग्रेसको कुनै भूमिका छैन । न त राजा महाराजाहरुले नै ‘कू’ गरेका छन् । संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणामा सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक झगडा नै जिम्मेवार छ । सम्पूर्ण रुपले नेकपाको झगडा, विवाद र असफलताले संसद विघटन भएको हो । यसमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका कहिकतै देखिँदैन । तथापि केही बुद्धिजीवी, मिडिया, नागरिक समाजका मानिस तथा दलहरु नेपाली कांग्रेसप्रति रोष व्यक्त गरिरहेकै छन्, हिजो पनि गर्थे, आज पनि गरिरहेका छन् । कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर आन्दोलन गर्दा पनि विरोध, निर्वाचन लड्दा पनि विरोध ।
आज अलग किसिमले आफ्नै बलबुतामा आन्दोलनमा निस्कँदा पनि विरोध नै छ । गर्न के पथ्र्यो पनि भन्न नसक्ने तर विरोध गरिरहने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पञ्चायतदेखि आजसम्म निरन्तर छ । कांग्रेसका विरुद्ध । अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नु हुँदैन, अदालतको आदेश वा फैसला सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ, त्यस प्रक्रियामा बाधा व्यवाधान पु-याउनु वा अनावश्यक विवाद खडा गर्नु दबाब दिनु वा निर्देश गर्न खोज्नु राम्रो होइन भन्ने कांगे्रसको आधिकारिक धारणाप्रति असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर पनि असन्तुष्टि र आन्दोलन जारी छ । यो वा त्यो व्यक्ति विशेषको कुरालाई लिएर कांगे्रसको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न उठाइराखिएको छ । नेकपाको कारण बिग्रिएको स्थितिको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिइदिनुपर्ने ? यसको दायित्व निर्वाह गराउन नेकपालाई बाध्य बनाउनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु पूर्वाग्रह हुनसक्छ ।
सत्ताकै लागि नेकपा बनाउने तत्कालीन एमाले र माओवादीको नेतृत्व पनि असफल भयो । असफल दलका असफल नेतृत्वसँग सहकार्य हुँदैन, स्वतन्त्र रुपमा अगाडिको यात्रातर्फ गर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको सोच, विचार, चिन्तन र निर्वाचनलाई उपयुक्त ठान्नु र मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
२०४६ सालमा कम्युनिष्टहरुसँग गरिएको सहकार्य र यहयात्रामाथि पनि प्रश्नचिह्न लगाइयो । ०६२–०६३ को आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरुको एजेन्डा बोकेका आरोप छ । संविधानसभामार्फत् बनेको संविधान जारी गर्दा कांग्रेसले अडान राख्न नसकेको कम्युनिष्टहरुको हत्तारोसँग उधारो सम्झौता गरेको भनेर आलोचित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सन्दर्भमा गरेको विरोधलाई लिएर पनि कांग्रेसमाथि नै हमला किन ? के कांग्रेसले संसद विघटन गरिएको हो ? अरु कसैको हस्तक्षेप भएको हो कि नेकपाको सत्तासंघर्षको उत्कृर्ष हो– संसद विघटन ? यस घटनामा ओली, दाहाल, नेपाल सबै बराबर जिम्मेवार होइनन ? न ओली न त दाहाल–नेपाल, कांग्रेस आफ्नै किसिमले स्वतन्त्र भएर असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलित हुँदा टाउँको दुख्नुपर्ने उचित तर्क त छैन ।
केवल आशंका गरेर, कल्पनामा डुबेर वा आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताको विश्लेषणका आधारमा मात्र कांग्रेस यसरी वा त्यसरी भएको वा उसको पक्ष वा विपक्षीमा उभिनुपर्छ भन्ने आग्रह दूषित देखिन्छ । ओलीको कदम नेकपाको असफलता हो, यसको जिम्मेवारी नेकपाले नै लिनुपर्छ भन्नु अनुचित हो ? जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पक्षलाई उन्मुक्ति दिने ढंगले कांग्रेसको समर्थन जुटाउन खोज्नु बेइमानी होइन ? कांग्रेस संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा छ । विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ, अदालतले दिएको फैसला वा आदेश मान्नुपर्छ भन्ने भनाइ कसरी गलत हुनसक्छ ? अरु कुनै शक्ति वा तत्वको कारण संसद समाप्त भएको भए, संयुक्त आन्दोलनको कुरा हुनसक्थ्यो, यो त नेकपाको कारण भएकोले नेकपाको कुनै पनि गुटसँग मिलेर आन्दोलित हुने वा सहकार्यमा जाने समय र परिस्थिति यो होइन ।
अदालतले संसद पुनस्र्थापना नगरेको अवस्थामा निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानको मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारीबाट नेपाली कांग्रेस बिमुख हुन मिल्दैन । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम वा कार्य अदालतबाट सच्चिन सकेन भने उक्त कार्य जनताको अभिमतमार्फत् सच्चाउनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दा जनताले लिने निर्णय र फैसलाले किनारा लगाउन सक्ने सर्वमान्य सिद्धान्तको बाटो अख्तियार नगरेको आरोप लाग्दैन ? यसप्रति सचेत भएर अदालतको आदेश वा फैसलापश्चात् आउने वा बन्ने परिस्थितिका लागि तयार हुने कांग्रेसको रणनीति कसरी अनुपयुक्त भयो ?
नेकपाको कारण बिग्रिएको स्थितिको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिइदिनुपर्ने ? यसको दायित्व निर्वाह गराउन नेकपालाई बाध्य बनाउनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु पूर्वाग्रह हुनसक्छ ।
निकट विगतको घटना ताजै छ । पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसको सहकार्य तोडेर एमालेमा हामफालेका होइनन ? आलीसँग सत्ता साझेदारीका लागि हिजोका सम्पूर्ण मूल्य, मान्यता, विचार आदर्श त्यागेका होइनन ? माधव, झलनाथको चरित्र के हो ? कांग्रेसलाई थाहा नभएको हो र ? ओलीलाई तह लगाउन नसक्नेहरुले कांग्रेसको सहयोगका याचना गरेर हुन्छ ? कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श र विचारअनुरुप लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि कुनै पनि कम्युनिष्ट घटकसँगको सहयात्रा वा सहयात्रा गर्न अनिच्छिुक हुन् नपाउने ? जबरजस्ती कहाँ तान्न खोजिएको ? हिजो मिल्नु गलत थियो भन्ने आज नमिलेर गलत हो भन्न दोहोरो मापदण्ड होइन ? कम्युनिष्टहरुले प्राप्त गरेको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन नसक्नु असफलता हो । संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार चलोस् भन्ने मनसाय राखेर संविधान बनाइएको हुँदा त्यसको परिपालना गर्नु आवश्यक थियो । त्यो काम नेकपाको नेतृत्वले गर्न सकेन, त्यसैले सत्ता सञ्चालन गर्न नेकपा असफल भयो ।
सत्ताकै लागि नेकपा बनाउने तत्कालीन एमाले र माओवादीको नेतृत्व पनि असफल भयो । असफल दलका असफल नेतृत्वसँग सहकार्य हुँदैन, स्वतन्त्र रुपमा अगाडिको यात्रातर्फ गर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको सोच, विचार, चिन्तन र निर्वाचनलाई उपयुक्त ठान्नु र मान्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक विषयहरु होलान्, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाली कांग्रेसकै हो । संसद विघटन निर्वाचनको घोषणा र अदालतमा विचराधीन मुद्दाका विषयमा कांग्रेसले लिएको निर्णय र कदमलाई अन्यथा भन्नुपर्ने वा आलोचना गर्नुपर्ने तर्कसंगत कारण छैन । देखिँदैन । धोकेबाज, भ्रष्ट र असफल कम्युनिष्ट नेतृत्वको पक्ष वा विपक्षीमा उभिनुपर्छ भन्ने भनाइसँग सहमत हुन सकिँदैन । यो पूर्वाग्रह हो ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नु हुँदैन, अदालतको आदेश वा फैसला सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ, त्यस प्रक्रियामा बाधा व्यवाधान पु-याउनु वा अनावश्यक विवाद खडा गर्नु दबाब दिनु वा निर्देश गर्न खोज्नु राम्रो होइन भन्ने कांग्रेसको आधिकारिक धारणाप्रति असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले धेरै आरोह अवरोधहरु व्यहोरेको छ । दुई ठूला छिमेकीहरुको बीचमा रहनु परेको पीडा पनि सहेको छ । हामी दुवै देशको सुरक्षा र सामरिक चासोका प्रति सचेत भएर प्रस्तुत हुन सकेनौं । राष्ट्रवादको नारा उछालेर जनतालाई विभाजित एवम् दिग्भ्रमित बनायौं । अनपेक्षित किसिमले दुई छिमेकीहरुले यहाँ चासो बढाएका छन् । उत्तरतर्फको छिमेकी खुल्ला किसिमले कम्युनिष्ट पार्टी मिलाउन आयो । सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर भए पनि पार्टी विभाजन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखायो । राजदूतको सक्रियता देखेर नेकपाको सचिवालय सदस्यकै रुपमा हेरियो । यस किसिमको भूमिकालाई दक्षिणी छिमेकीले सुष्म रुपमा हे-यो र विश्लेषण ग-यो ।
गुप्तचर संस्थाका प्रमुखदेखि सेनापति अनि विदेश सचिवसम्मको गोप्य र खुला भ्रमण तालिका निश्चय नै हाम्रो प्राथमिकतामा भएका थिएनन । यस प्रकारका गतिविधि एवम् भ्रमणहरु छिमेकीहरुको आफ्नो स्वार्थमा भएका थिए । यहाँका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र तुष्टिका कारण छिमेकीहरुको स्वार्थ प्रकट भएकोमा शंका नै छैन । कोराना महामारीले विश्व नै शिथिल भएको समयमा औषधिको राम्रो प्रवन्धसमेत गर्न नसकेको, अनेकौं काण्डमा फसेको, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, आफ्नो सम्पूर्ण विश्वासनीयता गुमाएको सरकारले संसद विघटन गर्दा निर्वाचनको घोषणा गर्नु बेइमानीको पराकाष्ट नै हो । एकातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समयमा उल्टो यात्रा गर्न खोजेको हो । बलियो समर्थन प्राप्त संसद विघटन सामान्य घटना होइन ।
जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । जनविरोधी, गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय लिएको स्पष्ट छ । यसले अगाडिको यात्रा निश्चित गरेको छैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरु उत्साहित देखिन्छन् । देशी, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको ध्यान नेपाललाई अस्थिर र असफल बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । यसको नेतृत्व नेकपा गरिररहेका छ । सरकार र सडकमा हुने र देखिने नेकपा नेपालको अन्धकारतर्फको यात्राको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसबाट देशलाई जोगाउन संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेस अझ अग्रसर र मुखर हुनुप-यो भन्ने आवाज स्वभाविक र उपयुक्त छ । तर नेकपाको यो वा त्यो समूहसँग मिल्नुप-यो, सहयात्रा र सहकार्य गर्नुप-यो भन्ने आग्रह किमार्थ उचित होइन । कांग्रेसको स्वतन्त्र पहिचान नै ठीक छ ।
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने नेकपा प्रचण्ड–माधव…
१७ फाल्गुन ११:४८
परिचयपत्र र नागरिकतासहित उपस्थित हुन् केन्द्रीय सदस्यलाई दाहाल–नेपाल समूहको…
१८ फाल्गुन १९:०८
दाहाल–नेपाल समूहद्वारा ओली, नेम्वाङ र चौधरीलाई दलबाट हटाएको संसदलाई…
२० फाल्गुन १८:३४